Nubico chịkọtara aha iri iji chọpụta Madrid site na akwụkwọ ọgụgụ | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Nubico chịkọtara aha iri iji mara Madrid site na akwụkwọ
Eva Maria Rodriguez | | Akwụkwọ, Noticias, ọtụtụ
Nubian, otu nke nyiwe nyiwe maka dijitalụ ọgụgụ n'okpuru ndenye aha nlereanya, dabakọrọ na oriri nke San Isidro, anakọtara aha iri iji mata Madrid, obodo ya, ndị ya na gburugburu ya dị iche iche n'akụkọ ihe mere eme ya, site na akwụkwọ.
«Melgbaze ọdịbendị nke ọdịbendị na ebe a na-ezukọ maka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị si mba dị iche iche gaa Madrid, Madrid bụ nchịkọta nke ọtụtụ abụ ndị a pụrụ ịkọwa site na akwụkwọ, nke ndị Madrilenians na ndị si mba ọzọ dere.«, Ha na-ekwu si Nubico na nkwupụta.
Ndị a bụ ọgụgụ 10 nke Nubico na-atụ aro ka ị banye n'ime akụkọ ihe mere eme nke Madrid.
#1 - Ihe nzuzo nzuzo nke Madrid, nke Ricardo Aroca (Mmalite nke Madrid)
Site na akwukwo a anyi gha amata mmalite Madrid. Akwụkwọ akụkọ ahụ bụ njem na-akpali akpali site na oge na-akọwa mgbanwe nke oghere obodo mepere emepe nke isi obodo site na mbido ya na oge ndị Alakụba rue oge a, na-enyocha ihe omimi nke dị n'usoro ọmụmụ nke ụfọdụ n'ime ụlọ ndị nnọchi anya ya kachasị. Njegharị a nke obodo na-enye anyị ohere ịghọta otú mgbanwe nke ọha mmadụ, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na akụ na ụba si egosipụta ozugbo na mmepe obodo.
#2 - Captain Alatriste, nke Arturo na Carlota Pérez-Reverte dere
Akwụkwọ akụkọ a ga - enyere anyị aka ịmata Madrid nke Habsburgs site na nsogbu nke onye agha gara aga nke atọ nke Flanders. Ihe omume ya na-emikpu anyị n'ime aghụghọ nke Courtlọikpe nke Spain rụrụ arụ, n'okporo ụzọ gbara ọchịchịrị n'etiti nchapụta nke nchara abụọ ma ọ bụ n'etiti ụlọ obibi ebe Francisco de Quevedo na-ede ihe egwu.
#3 - Akụkọ banyere ndụ nke Buscónnke Francisco de Quevedo dere
Ọrụ Quevedo bụ otu n'ime ndị kachasị egosipụta Golden Age na otu Madrid na Barrio de las Letras (Huertas) siri pụta na narị afọ ndị a dịka otu n'ime etiti akwụkwọ Spanish niile: Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Góngora na mgbe e mesịrị Moratín, Espronceda ma ọ bụ Larra, biri ụbọchị ha.
#4 - Onye ọjọọ nke Vallecasnke Tirso de Molina
Onye ọzọ n'ime ndị nnukwu Madrid dere akwụkwọ Golden Age bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na Tirso de Molina. Njikọ dị n'etiti onye edemede a na Madrid nwere ike ịhụ n'ọtụtụ nnabata nke ọrụ ya na isi obodo, dị ka ọ dị Obodo nke Vallecas, ihe ọchị nke na-atụ anya ọzọ ọrụ nnọchiteanya ya kachasị Onye aghụghọ nke Seville. Woulddị ụdị a ga-emecha laghachi azụ site na akụkọ ihe mere eme mere na Spain: ntinye nke Napoleon na, karịa ihe niile, Ngbaghara nke May 2 na Agha nke Nnwere Onwe.
#5 - Usoro nke mba I. Agha nke Nnwere Onwe, Benito Perez Galdos
Nke a bụ ọrụ mmechi nke onye edemede ya na ihe osise kachasị mma nke Madrid n'oge ahụ. Njikọ agha na nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Spain nwere kemgbe ihe karịrị afọ isii na-agwakọta, na-eduga na ọgba aghara nke May 2 megide ọrụ ndị France, bụ nke Madrid na-arụ ọrụ dị mkpa. Daoiz na Velarde mana karịsịa Manuela Malasaña ga-agbadata dị ka akara ngosi nke obodo ahụ, na-akpọ otu n'ime ógbè ndị ama ama n'obodo ahụ.
#6 - Ihe ọkụ ọkụ Bohemiannke Valle Inclán dere
Site na ọrụ a, anyị ga-abanye na nsogbu nke 98 na Ọgbọ nke 98 ma anyị ga-amata ụlọ ahịa na nnọkọ nke Center. Ọtụtụ afọ mgbe nke ahụ gasịrị, otu ihe mere eme nke ọma na mba anyị mere: nsogbu nke 98. Oge a malitere nnukwu ọgbọ nke oge a, yana ndị edemede nke Valle Inclán na ọrụ ya pụtara ìhè. Ihe ọkụ ọkụ Bohemian. Akwụkwọ edemede nke Madrid na ọnụ ọgụgụ a na-agaghị echefu echefu nke Max Estrella bụ ihe osise nke Madrid bohemian, ebe ìgwè mmadụ gbakọtara na kọfị iji kwurịta okwu metụtara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na akwụkwọ.
#7 - Nwamba Na-alụ ọgụnke Eduardo Mendoza dere
Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, ihe omume ọzọ mere akara akwụkwọ Spanish na Madrid: Spanish Civil War. N’ebe a ka edoziri ya Cat ọgụ. Ikechukwu 1936,ọrụ starring a na-eto eto English, a ọkachamara na oge gboo art, onye kwagara Spanish isi obodo na aka a ogwu nkata nke nledo na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ihe a niile edobere na Madrid na oge tupu oge opupu ihe ubi nke 1936, ụbọchị tupu ntiwapụ nke Agha Obodo Spanish.
#8 - Agbamakwụkwọ atọ nke Manolita, nke Almudena Grandes dere
Ọ bụ kpomkwem na Madrid dị nnọọ si Civil War ebe a akwụkwọ akụkọ. Ọ bụ akụkọ mmetụta uche banyere agha mgbe afọ ịda ogbenye na akụkọ a na-agaghị echefu echefu nke ndụ na akara aka na-enwe ezigbo ndị mmadụ na-eche n'echiche na Madrid.
#9 - Alaska na akụkọ ndị ọzọ banyere ịkwaga, nke Rafa Cervera dere
Ọnọdụ agha a siri ike dị iche na gburugburu ọgbakọ otu afọ ga-emecha gosipụta isi obodo ahụ n'oge a maara "La movida madrileña". Na-arụ ọrụ dị ka Alaska na akụkọ ndị ọzọ banyere ọnọdụ ahụ Ha dị oké mkpa ịmata ihe nzuzo nke oge akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị a mere n'okporo ámá Madrid dịka Malasaña, Luchana, Covarrubias, Tribunal ma ọ bụ mpaghara Sol.
#10 - Madrid 1987nke David Trueba dere
Ma ikwu banyere 80s na-ekwukwa banyere ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mgbanwe. A nwere ike ịhụ ihe atụ nke oge a na akwụkwọ akụkọ a, nke na-akọ akụkọ banyere Miguel, onye ọdee akwụkwọ akụkọ ochie, egwu na ịkwanyere ugwu, yana Angela, nwata akwụkwọ afọ ọhụrụ nke akwụkwọ akụkọ. Dị ka ụgbọ oloko abụọ, omume ha na-aga n'ihu na Spain na 1987, mba nke mechara mechie isi nke Francoism ma tinye ya na ọchịchị onye kwuo uche ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Nubico chịkọtara aha iri iji mara Madrid site na akwụkwọ
Worldwa nke Valken. Oke osimiri n’ọkụ
Uche choro akwukwo dika mma agha site na whetstone